Sary avy amin'ny Apple Watch, Tower Theater Store, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Indray Alahady indray dia te-hizara aminareo izahay ny sasany amin'ireo vaovao mahaliana sy miavaka indrindra amin'ny hoe avy any Mac aho. Nangina ihany ity herinandro ity fa nanana maromaro izahay vaovao mahaliana momba an'i Apple sy ny vokatra vokariny.
Mazava ho azy, rehefa tonga ny fahavaratra, dia mitombo ny tahan'ny vaovao na tsaho, indrindra ny momba ny iPhone, fa misy ihany koa ny vaovao momba ny Apple Watch, ireo Mac vaovao vaovao mety sy ny hafa. Ka aleo mahazo aina ary mankafy amin'ity alahady ity miaraka ny sasany amin'ireo vaovao nasongadina tamin'ity herinandro ity alohan'ny Jolay.
Amin'ity herinandro ity dia manomboka amin'ny tutorial kely izay ataontsika amin'ny Mac amin'ny Mac aho ho an'ireo mpampiasa manana Apple Watch sy maniry maka sary vondrona na mametraka ny iPhone tsy ho tratrany maka sary. Efa hatry ny ela io fiasa io, saingy azo antoka fa hisy olona hahatadidy ny fomba fiasany.
vaovao Apple Store Apple Tsy isalasalana fa mahavariana izany na ao anatiny na any ivelany ary Apple dia iray amin'ireo orinasa tia mizara ireo fisokafana ireo mba hampisehoana ny asa vita ao amin'izy ireo. Toa manaitra tokoa ilay fivarotana, koa raha eo akaikinao ianao dia manoro hevitra anao izahay hitsidika azy.
Amin'ity dingana ity tsy dia be loatra ny tsaho momba ny mety hanombohana Mac Pro vaovao, saingy fantatra fa amin'ity taona ity dia mety ho anjaran'ny ekipa Apple matanjaka. Ny tolo-kevitra rehefa handeha hividy Mac Pro ianao dia miandrasa raha afaka, lojika raha mila fitaovana ianao dia aza mividy azy fa afaka manana Mac Pro vaovao isika amin'ny faran'ny taona.
Mba hamaranana dia te hiresaka Apple Watch Series 7 mbola ho avy izany ary ny tsaho vaovao momba ireo singa anatiny dia manondro fa mety hanana toerana bebe kokoa ao anatiny ilay fitaovana hanampiana bateria lehibe kokoa, na karazana sensor hafa misaotra ny fanatsarana puce. Ho hitantsika izay hatairan'i Apple antsika amin'ity andiany 7 vaovao ity izay efa manakaiky ny fanolorana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Sary avy amin'ny Apple Watch, Tower Theater Store, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho